Lalana fiaran-dalamby TCDD ary Sarintany YHT Sarintany 2019 tena izy | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06TCDD Railway Routes sy YHT Lines Map 2019
05 / 08 / 2019 Ankara 06, Central Anatolia, Intercity Railway Systems, Railway, ANKAPOBENY, Fast train, SARINTANY, Headline, TORKIA
Fiarandalamby fampiasa amin'ny seranana haingam-pandeha 1
TCDD Railway Route sy High Speed ​​Train (YHT) tsipika 2019 Map Nohavaozina: Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD), ny Tale ny Tiorka paritra lalamby-panjakana sy ny lalamby 2019-daty sarintany mampiseho ny Border rayhaber.comAmin'ny.
Ny Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD), ny amin'izao fotoana izao Map pejy mizara azy ireo miaraka aminao. Ny sari-tany dia nomanin'ny TCDD ary mampiseho ny làlan-dalamby ankehitriny amin'ny taona 2019. Ho an'ireo maniry hahazo fanazavana momba ny lalamby sy làlan-dàlana dia zarainay aminao ireo sari-tany ireo. Rehefa mamoaka sarintany mampiseho ny làlan-dalamby vaovao i TCDD, dia hizara izany amin'ny tranokalanay izahay.
Tiorka State lalamby MAP
Tsindrio eo amin'ny sari-tany mba hahazoana fanapahan-kevitra ambony kokoa.
TCDD 'DIANA MPITANDRINA
TCDD Istanbul 1. Faritra, Ankara 2. Faritra, Izmir 3. Faritra, Sivas 4. Faritra, Malatya 5. Faritra, Adana 6. Faritra sy Afyonkarahisar 7. Ny talen'ny faritra, anisan'izany ny 7 Regional Directorate, dia manana rafitry ny faritany ary miasa miaraka amin'ny faritra YHT ao Ankara.
Amin'ny ankapobeny, ny 8 dia misy fizarana ary ity sarintany manaraka ity dia mampiseho ireo faritra izay tompon'andraikitra amin'ireo faritra:
TORKIA fiaran-dalamby haingam-pandeha (YHT) LINE MAP
Tiorkia voalohany tao Ankara 2009 - fiaran-dalamby haingam-pandeha 245 ny tsipika eo Eskişehir lKm, androany (Febroary - Tamin'ny 2019) dia anisan'ny Konya sy Istanbul, ary niampita ny halavan'ny tsipika xnumxkm'y amin'ny Wikibolana anglisy. Tiorkia lalamby haingam-pandeha andalana, fanorenana ny fiaran-dalamby haingam-pandeha sy ny fiara fitateram-bahoaka tsipika andalana izay mitondra mpandeha fifandraisana dia ny hizara aminareo eo amin'ny sarintany.
Sarintany fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony Ankara Istanbul: fijanonan'ny 9 eo amin'ny sisin-dalamby mankany Ankara Istanbul High Speed ​​Train be dia efa tapa-kevitra toy ny Polatli, Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Pamukova, Sapanca, Izmit, Gebze ary Pendik. Ny zotram-pandeha haingam-pandeha ambony ao Ankara-Istanbul dia hampidirina any Marmaray miaraka amin'ny tsipika an-tsokosoko ao Pendik. Ny fitaterana mitohy dia hatolotra hatrany Eropa ka hatrany Azia.
Ankara Istanbul High Speed ​​Train Project, tsy miankina amin'ny tsipika efa misy 533 km lavitra Ny 250 dia misy ny fananganana lalamby haingam-pandeha haingam-pandeha avo roa tonta, elektrika ary fehezanteny rehetra, ho an'ny hafainganam-pandeha km / h.
Noho ny fahavitan'ny tetikasa dia hihena ao anatin'ny telo ora ny Ankara-Istanbul. Izy io dia mikendry ny hampitombo ny ampahany amin'ny lalamby amin'ny fitateram-bahoaka amin'ny lalana mankany 10 ka hatramin'ny 78 isan-jato. Ankara Istanbul High Speed ​​Line dia hiaraka amin'i Marmaray hanomezana fitaterana tsy misy fahatapahana avy any Eropa mankany Azia. Miaraka amin'ity tetikasa ity, izay mampifandray ireo tanàn-dehibe roa lehibe ao amin'ny firenentsika, ny fifanakalozana ara-tsosialy, ara-toekarena ary kolontsaina eo anelanelan'ny tanàna dia hitombo ary ny firenentsika, izay efa tafiditra amin'ny maha-Eropeana azy dia ho vonona amin'ny foto-drafitrasa fitaterana azy.
Ankara İstanbul YHT Information Information
Ny tetikasa 8 dia ahitana fizarana miavaka;
Railway Eskisehir: 2.679 m
Ankara Istanbul fiaran-dalamby haingam-pandeha, Eskisehir - Lalana Sakarya
Ho vita roa ambaratonga roa ny Tetikasa fiaran-dalamby any Ankara Istanbul. Ny dingana voalohany amin'ny tetikasa, Ankara Eskişehir High Speed ​​Line, dia nampidirina tao amin'ny 2009. Mitohy ny fananganana ny tsipika Eskişehir Istanbul, dingana faharoa amin'ilay tetikasa. Ny Foundation of Köseköy Gebze Stage dia napetraka tao amin'ny 28.03.2012.
I Sincan Esenkent sy ny Esenkent-Eskişehir Lines dia notendrena.
Ny tsipika haingam-pandeha haingam-pandeha avo lenta sy ny volavolan-tsolika haingam-pandeha haingam-pandeha ambony…
Istanbul New Metro sy làlambe Airline ary làlana
Ny ao Eskişehir dia misy fiara fitaterana sy sasany uzat
Europe Ro-La Train Route Map sy avy any Torkia
Fandefasana fiarandalamby goavana 2019
YHT Train Times
Fanamarihana momba ny Tender: Fampidinihana drafitra famokarana drafitra ho an'ny lalana sy làlana
Fampandrenesana ny Tender: Ny tombantomban'ny fananana trano amin'ny alàlana sy ny fomba fandroahana…
MyAntalya Transportation Menu fizahan-tany toy ny Antray, Nostalgic Tram Ulaşım
Sarintanin'ny State Railways
lalamby haingam-pandeha sarintanin'i Torkia
Tiorka State lalamby 2012 MAP
Sarintanin'ny lalamby TCDD
Sarintany momba ny lalamby TCDD
Misaotra anao ni diniho